हजार रुपैयाँको नोटमा कसरी आयो जोर हात्तीको चित्र ? – Clickmandu
हजार रुपैयाँको नोटमा कसरी आयो जोर हात्तीको चित्र ?
क्लिकमान्डु २०७७ कार्तिक २८ गते १९:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । चाडपर्वको समयमा आफन्त साथीभाइको जमघट बढ्ने, किनमेलमा बजारमा चहलपहल बढ्ने जस्ता कार्य सामान्य हुन् ।
नेपालमा बर्षभरी हुने कुल व्यापारको करिब ४० प्रतिशत व्यापर पनि दशैँ र तिहारको समयमा नै हुने तथ्यांकले देखाउँछ ।
चाडपर्वको समयमा सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी नै बजार चलायमान हुँदा यसको फाइदा कालोबजारी तथा नक्कली नोटको कारोबार गर्नेले उठाउने गर्छन् ।
विशेषगरी दशैको समयमा नयाँ नोट बजारमा बढी चलन चल्तीमा आउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत दशै लक्षित विभिन्न दरका नयाँ नोट सटही गर्ने गरेको थियो ।
यसबर्ष भने कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण सो कार्य केन्द्रीय बैंकले स्थगित गरेको छ । तर पनि स्टकमा रहेको खुद्रादरका नयाँ नोट र सुकिला नोट गरी बैंकहरुबाट ५५ अर्ब रुपैयाँ असोज अन्तिम सातादेखि दशैं बिदाअघिसम्म सटही भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
जसमा खुद्रादरका नोट २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणहरुले बैंकहरुबाट सटही गरेका छन् ।
सोही नयाँ तथा सुकिला नोटमध्ये हामी कतिपयको हातमा उस्तै देखिने नक्कली नोटसमेत हुन सक्छ । नेपालमा साना दरका नोटहरुमा १,२, ५, १०, ५० र १०० रुपैयाँका नोट चलनचल्तीमा छन् भने ठुला दरका नोटमा ५०० र १००० रुपैयाँका नोटहरु चलनचल्तीमा रहेका छन् ।
प्रायजसो नक्कली नोट छपाइ गरी कारोबार गर्नेहरुले सानादरका भन्दा ठुलादरका नोट नै छपाउने हालसम्म पाइएको छ ।
बजारमा आउँने यस्ता जाली नोट रोक्न र नोटको सुरक्षण तथा गुणस्तर बढाउनको लागि नोटको आकार बनावटमा परिवर्तन गरिने राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले जानकारी दिएका छन् ।
‘हजारको नयाँ नोटमा प्रयोग गरिएका धेरै सुरक्षणका फिचरहरु सामान्य व्यक्तिले पत्ता नै लगाउन नसुक्ने वा त्यसको प्रतिलिपी नै बनाउन नसक्ने छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा प्रयोग भएका सुरक्षण धागो विषेश प्रकारका छन् भने, मसीहरुको प्रयोग कलर प्रिन्ट गर्दा आउँदैन भने नोट हेर्दा पनि पहिलेको भन्दा धेरै स्तरीय छ ।’
बजारबाट पुरानो नोट ल्याएर जलाउने र नयाँ नोट ल्याउने राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । तर बिषेशगरी अहिलेको हजारको नोटमा नयाँ सुरक्षणका फिचर थप गर्नुको कारण बजारमा जाली नोट आउन नपाओस् । र, नोटको आयु बढोस् भन्ने उदेश्यले ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
गत साउनमा केन्द्रीय बैंकले हजारको नोटमा धेरै परिवर्तन गरी नयाँ नोट चलनचल्तीमा बजारमा ल्याएको छ । जुन परिवर्तित नयाँ हजारको नोट अहिले बजारमा अधिकांश सर्वसाधारणको हातमा परिसकेको छ ।
चलनचल्तीमा रहेका पुराना हजारको नोटमा बानी परेका कतिपय सर्वसाधारणले नयाँ हजारको नोटलाई नक्कली पो हो कि भनेर शंका पनि गर्न थालेका छन् ।
हजारको पुरानो र नयाँ नोटमा भएका विषेशताबारे राम्रोसँग जानकार नभएका कारण कतिपय व्यक्तिहरुले नयाँ हजारको नोटलाई नक्कली समेत मानिरहेका छन् ।
सर्वसाधारणमा हुने नोटप्रति हुने यस्ता अन्यौताको फाइदा जाली नोट छपाइ गर्नेहरुले उठाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । सोही कारण बजारमा आएका नयाँ नोट, त्यसको विषेशता र त्यमा गरिएको परिवर्तनको बारेमा सर्वसाधारणले बुझ्न धेरै आवश्यक हुन्छ ।
सोही आवश्यकतालाई मध्ये नजर गर्दै हामीले राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय चलनचल्तीमा ल्याएको हजार दरको नयाँ नोट र पुरानो नोटको फरक, विषेशतालगायत यसको पहिचान बारे चर्चा गरेका छौं ।
राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता चलनचल्तीमा ल्याएको नयाँ हजार दरको नोटमा सर्वसाधारणले झट्ट हेर्दा सबैभन्दा पहिले देख्ने फरक भनेको नोटमा रहेको हात्तीको चित्र नै हो । पुरानो हजारको नोटमा एक वटामात्रै हात्तीको चित्र अंकित थियो भने नयाँ नोटमा २ वटा हात्तीको चित्र छ ।
साथै उक्त नोट राष्ट्र बैंकका नयाँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्त भएको २ महिना पछि चलन चल्तीमा आएको हो । तर उक्त नोटमा पुरानै गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको हस्ताक्षर छ ।
यसकारण राखियो हजारको नोटमा २ वटा हात्तीको चित्र
पुरानो हजारको नोटमा रहेको हात्ती नेपालमा पाइने हात्तीको प्रजाती नभएको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालमा पाइने हात्तीको बनावट अनुसार उक्त हात्ती नेपालको नभएपछि नयाँ नोटमा नेपालमा नै पाइने हात्तीको चित्र राखिएको नोट विभाग प्रमुख नेपालले बताए ।
‘नेपालमै पाउने हात्तीको चित्र राख्नुपर्छ भनेर नोट डिजाइन कमिटीले पास गरेपछि त्यो अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण विभाग, वन्यजन्तु तथा संरक्षण विभागले उपलब्ध गराएको चित्रलाई आधार बनाएर नोट छापिएको हो,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘जसमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको देवकली नामकी हात्तीबाट जन्मिएका जुम्लयाहा ‘राम-लक्ष्मण’ हात्तीको चित्र राखिएको हो ।’
हात्तीले विरलै जुम्लयाहा बच्चा जन्माउने र नेपालमा ‘राम-लक्ष्मण’ नै पहिलो जुम्लिया हात्ती भएका हुँदा हात्तीको संरक्षणको लागि समेत उनीहरुको चित्र प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यसबाहेक पनि नयाँ हजारको नोटमा धेरै परिवर्तन गरिएको छ ।
नयाँ नोटको विषेशताहरु
राष्ट्र बैंकले नयाँ हजारको नोट सफा नोट नीति अन्तर्गत ल्याएको र यसमा हात्तीको चित्र बाहेक अन्य धेरै परिवर्तन गरेको केन्द्रीय बैंकका नोट विभाग प्रमुख नेपालले बताए ।
‘नयाँ नोटमा केही फिचरहरु यस्ता छन्, जुन जाली नोट छपाइ गर्नेले जे गरेपनि प्रयोग गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले राखेको धागो नोटका लागि कागज तयार गर्दा नै बनाउनु पर्छ, बाहिर कसैले त्यो बनाउन सक्दैन ।’
पानीछाप (वाटरमार्क) लाई उज्यालो प्रकाशतर्फ राखेर हेर्दा कलर परिवर्तन हुने उनले जानकारी दिए । साथै नयाँ नोटको पछाडिबाट टर्च लाइट वा मोबाइलको लाइटको माध्यमबाट हेर्दा लालीगुँरासको आकृतिको नोटको नम्बर, सगरमाथाको चित्र र गभर्नरको हस्ताक्षर भएको भाग र पृष्ठ भाग दुवैतर्फबाट हेर्दा स्पष्ट देखिने उनले बताए ।
नयाँ हजारको नोटको दाँयातर्फको तल्लो भागमा दृष्टि बिहिनहरुले छामेर पहिचान गर्न सक्ने एक हजार जनाउने अंग्रेजीमा ‘एम’ लेखिएको छ । उक्त अक्षर प्रिन्ट भएको स्थानमा नोटलाई छाम्दा नोटको अन्य स्थानमा भएको अक्षर केही माथि उठेको अनुभव हुन्छ ।
साथै, दृष्टिविहीनहरुका लागि तीनवटा गोलाकार थोप्लाहरु समेत राखिएको हुँदा उक्त विशेषताहरु नोटलाई छामेर पत्ता लगाउन सकिने गरी राखिएको नेपालले जानकारी दिए ।
‘नयाँ नोटमा बत्ति बालेर हेर्दा, छामेर वा त्यसमा भएका भित्री फिचरहरु सम्बन्धीत विभागमा काम गर्ने कर्मचारीले मात्र थाहा पाउन सक्ने राखिएका छन्,’ उनले थपे, ‘यसमा राखिएका कतिपय फिचरहरु सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन । तर नोट छाप्ने र सोही विभागमा काम गर्ने कर्मचारीले मात्र विभिन्न तरिकाले पत्ता लगाउँछन् ।’
यसैगरी, सुरक्षण धागोमा एनआरबी उल्टो रुप क्रमैसँग लहर मिलाएर लेखिए छ भने नोटमा सुरक्षण धागो केही अंशहरु मात्र देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा पुरै नदेखिएपनि उज्यालोमा तर्फ फर्काएर वा लाईटको माध्यमबाट हेर्दा पूरा तथा स्पष्ट एनआरबी देखिन्छ ।